DEG DEG Xarunta hayda CID-da ee magaalada Muqdisho oo laweeraray. – Radio Daljir
Luulyo 31, 2016 1:53 b 0
Muqdisho, July 31 2016—Rasaas xoogan iyo qaraxyo ayaa laga maqlay maanta xarunta Hay’ada dambi baarista Soomaaliya ee CID-da ee magaalada Muqdisho, kadib markii lagu qaaday weerar Ismiidaamin ah sida wararku sheegayaan.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaa in labo qarax oo wax ka yar kala dambeeyey lagu weeraray xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyada kadib bilowday rasaas xoogan oo qaarkood ay ka dahceyso gudaha xaruntasai.
Saraakiisha Amniga ayaa sheegay in Toogasho lagu dilay Dableeydii Weerarka ku qaaday xarunta Dambi baarista Ciidanka Booliska Soomaaliya ee CID.
Xarunta CID-da oo kutaal isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku xiran maxaabiis dambiyo kala duwan loo heesto, waxaa sidoo kale xaruntaasi ay tahay mid mashquul badan.
DHEGEYSO-Xanuunka Kaduudiyaha oo kusii fidaya gobolka Mudug.